Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Frantsa | JW.ORG
Topy Maso An’i Frantsa
Nekena ho ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah any Frantsa, tamin’ny 1906. Afaka mandeha mivavaka malalaka tsara izy ireo. Nanao tatitra hoe “Sekta eto Frantsa” ny antenimieram-pirenena tamin’ny 1995 tany ho any. Anisan’ny lazaina fa sekta mampidi-doza ny Vavolombelon’i Jehovah. Nampiasaina mba hikendrena ny Vavolombelona ilay tatitra na dia tsy misy vokany mifandray amin’ny lalàna aza. Nanomboka nankahalain’ny olona sy navakavahany ny Vavolombelon’i Jehovah nanomboka teo.
Nisy zavatra faran’izay mafy nataon’ny fitondram-panjakana. Nitakiany hetra ambony be ny Vavolombelon’i Jehovah satria mahazo fanomezana an-tsitrapo. Tian’ny fitondram-panjakana tsy hanam-bola intsony mantsy ny foiben’izy ireo any an-toerana. Nitohy nandritra ny 16 taona ny ady teny amin’ny fitsarana. Farany, tamin’ny 30 Jona 2011, dia niara-niaiky ny tao amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona (CEDH) fa tsy nanaja ny fahalalahana ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny fanjakan’i Frantsa. Niady teny amin’ny fitsarana koa ny Vavolombelon’i Jehovah any Frantsa, tamin’ny raharaha hafa satria navakavahana. Tsy nomena fahazoan-dalana hanorina trano sy hitory any amin’ny fonja, ohatra, izy ireo, ary tsy navela hanofa toerana ho an’ny besinimaro mba hanaovana fotoam-pivavahana.
Mbola ahiahin’ny olona ihany ny Vavolombelon’i Jehovah any Frantsa satria avakavahan’ny fanjakana, na dia eo aza ny didim-pitsarana navoakan’ny CEDH sy ny fandresena maro azon’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny fitsarana teo an-toerana. Imbetsaka àry ny Vavolombelona any no misy manafika sy mandrahona, ary imbetsaka ny trano fivorian’izy ireo no misy mandrava.